Inkcazo kunye neMimiselo yexesha elikhoyo leMbali
Ngesi-grammar yesiNgesi , okwangoku imbali isetyenziswe kwisenzi sesenzi ngexesha langoku ukubhekisela kwisiganeko esenzeka ngaphambili. Kwiingxelo, umxholo wembali ungasetyenziselwa ukudala umphumo wokukhawuleza. Kwakhona kuthiwa ngumlando wamandulo , okwangoku , kunye neengxelo ezikhoyo .
Ngengqiqo, ukusetyenziswa kwexesha elikhoyo ukunika ingxelo ngeemeko ezidlulileyo kuthiwa i- translatio temporum ("ukudluliselwa kwamaxesha").
Uthi u-Heinrich Plett uthi: "Igama elithi translateo litshitshisa ngokukhethekileyo," kubhala u-Heinrich Plett, "kuba liyizwi lesiLatini elisichasayo ." Kubonisa ngokucacileyo ukuba umxholo wembali ukhona nje nje ukuphambukiswa kwezotysi kwithuba elidlulileyo "(I- Rhetoric ne-Renaissance Culture , 2004 ).
Jonga imizekelo kunye nemiba engezantsi.
Indlela Yokuqalisa Umxholo: 13 Ukuzibandakanya Inkqubo Ngeemizekelo
"Ngumhla wohlobo olukhanyayo ngohlobo lwe-1947. Ubawo, inqatha, indoda ehlekisayo kunye namehlo amahle kunye nogwenxa, uzama ukugqiba ukuba yeyiphi na abantwana bakhe abalisibhozo azothatha kunye naye kwi-county fair. , akayi kuhamba. Unqabile ukuba angenakulungelelanisa: Ndiyibambe intamo yam enxamnye noxinzelelo lwamaqhina akhe njengoko ekhawuleza ukugqiba ukukhangela kunye nokukhanda kweenwele zam ... "
"Kukho ibali elidumileyo likaMongameli uAbraham Lincoln, ethatha i-vote kwiintlanganiso zeKhabhinethi malunga nokuba ungayityina i-Emancipation Proclamation.
"Iindibano ' zengxelo zembali ' zichaza into eyenzekayo kwixesha elidlulileyo. Ixesha langoku lisetyenzisiweyo ngenxa yokuba iinyani zibhalwe njengesishwankathelo, kwaye ixesha langoku linika ingqiqo yokuphuthuma. Ummemezeli angathi ekuqaleni, 'Umlilo uhlasela isakhiwo sesikhululo sasesisixeko, urhulumente uvikela umphathiswa omtsha, kunye nebhola lebhola leSixeko, eUnited States.' "
"Ukuba uthetha izinto ezidlulileyo njengokuba zikhoyo kwaye ngoku zenzeke, uya kwenza ibali lakho lingabi libalathiso kodwa liyiyo."
Umzekelo we-Historical Present in A Essay
"Ndingumntwana oneminyaka engama-9 ubudala, ebhedeni, ebumnyameni." Iinkcukacha zisegumbini zicacile kakuhle, ndilele emlenzeni wam. "Ndine-greed-gold quilted eiderdown. Iminyaka engama-50 ubudala ngo-1997. 'Amashumi amahlanu' kunye no-1997 'ayithethi nto kum, ngaphandle kokuphendulwa kombuzo we-arithmetic ndibeka yona. Ngo-1997 ayinandaba. 'Ndiya kuba ngu-50. Ndiyena-9: 'Ndiya kuba seshumi' inengqiqo. 'Ndiya kuba ne-13' inokukhula okufana nephupha ngayo. 'Ndiya kuba ngu-50' nje ngento ecacileyo yento endiyithandayo. busuku: 'Ndiya kufa ngelinye imini.' 'Ngenye imini andiyi kuba.' Ndizimisele kakhulu ukuva isigwebo njengento yokwenene, kodwa ndihlala ndibalekile. "Ndiza kufa" kuza nomfanekiso wesidumbu ebhedeni. Kodwa ke ngowam, umzimba oneminyaka engama-9 ubudala. Ndiyayenza imdala, ibe ngumnye umntu.Ndikwazi ukucinga ukuba ndifile.Ndikwazi ukucinga ukuba ndifa.Nokuba umzamo okanye ukungaphumeleli ukwenza oko ndibenza ndiveke ... "
Umzekelo we-Historical Present in Mememoir
"Inkumbulo yam yokuqala yokuqala yento engaphandle kwam, ayiyiyo yeDuckmore kunye nemimandla yayo kodwa isitalato." Ndiya kuphuma esangweni lethu langaphambili nakwihlabathi eliphambili. emva kokuba sifuduke xa ndingengabikho abathathu. Ndihamba nge-pavement, kwaye ndisiya kwimida engapheli yesitrato - ngaphaya kwesango le-No. 4-kwaye ngomeleleyo, ndade ndifumane kwindawo entsha i-landscape kunye ne-flora yayo yangaphandle, ubuninzi be-pink ilityambo ebomvu kwi-ranjler e-tangled yavuka ixhomekeke kwintambo yomyezo. Ndiye ndade ndafikelela kwisango laseJan. 5. Kule ngxaki, ngandlela-thile ndazi ukuba Ndivela ekhaya kwaye ndilahlekelwa ngokukhawuleza yonke into endiyifunayo. Ndiyajika ndibuyele kuNombolo 3. "
"Ngaba-Ngaba Kukho Ukukholelwa"
"Xa i-reference point of narration ingengomzuzu okwangoku kodwa inqaku elidlulileyo kwixesha elidlulileyo, sinayo ' imbali yembali ,' apho umbhali ezama ukuhambisa iparachute umfundi phakathi kwebali elibonakalayo ( uGenevieve uvukile ebhedini I-crebhodi ye-floorboard .... ) Ixesha langoku liphindwa lisetyenziselwa ukusekwa kweehlaya, njengokuba ku- A guy ehamba ebharini enekhanda entloko yakhe . Okwenzekayo kwimbali yenkcazelo ingabonakalisa i-device edityanisayo, inokuthi ivale ingxaki. Umlawuli wachaza kuye ukuba umboniso ufanele uveze 'ukuhlalutya okungaphantsi, ukubonakalisa okungaphantsi' kunye 'nokunyusa, ukutshisa ngakumbi' kunokubonakalisa iindaba eziphathekayo ebusuku.
"Gweba ukusetyenziswa kwembali nje ngaphandle kokuba le nkcazelo ibonelele ngokucacileyo ukuze isebenzise ngokuzenzekelayo. Okwangoku imbali yinto enesibindi semifanekiso kwaye, njengokuba kunjalo nazo zonke izibalo, ukusetyenziswa kwayo ngokugqithisileyo kwenza isitayela esincinci kwaye ihlaziyeke."
U-Alice Walker, "Ubuhle: Xa omnye uDancer yi-Self." Ukukhangela Iiglasi Zomama Zethu: Iproseist Prose . I-Harcourt Brace, ngo-1983
UPeter W. Rodman, uMongameli woMongameli . Vintage, 2010
"IiNkcukacha zeelwimi," iNkonzo yeSizwe ye-BBC
Longinus, kwi-Sublime . Ukuxutyushwa nguChris Anderson kwiSitethi njengeSivumelwaneni: I-Contemporary American Nonfiction . I-Southern Illinois University Press, ngo-1987
UJenny Diski, "iDayari." Ukuhlaziywa kweencwadi zeLondon , ngo-Okthobha 15, 1998. Ukuhamba. phantsi kwesihloko esithi "Ngama-50" kwi -Art of the Essay: I-Best of 1999 , ed. nguPhillip Lopate. Books Anchor, 1999
UMichael Frayn, uBawo wam uBawo: Ubomi . KwiMetropolitan Books, ngo-2010
USteven Pinker, i -Stuff of Thought . Viking, 2007
UJames Finch Royster noStith Thompson, isiKhokelo sokuBumba . UScott, Foresman, ngo-1919
Yiyiphi intsingiselo? Inkcazo kunye nemizekelo kwigrama
Irejista ebanzi (izibhengezo)
I-Adverb (I-Adverbial) Isiqendu Inkcazo kunye nemizekelo
Ibinzana lentetho (amagama kunye nezivakalisi)
Ukwahluka kwamahhala kwi-Phonetics
Eziqhelekileyo (ezidliwayo) I-Periwinkle
Oko Kufuneka Ukwazi NgoMbutho Obuthathaka
Yintoni i-Latitude kunye neLines Lines kwiMaphu?
Inkcazo ye-Encapsulation kwi-Computer Programming
I-B-52 ephuza iReperipe
Dibana no-Gabriel oyiNtloko, isithunywa seZityhilelo
Yintoni uMculo weDancing Craze?
Uluhlu lwezobugcisa obuphezulu